Turbocharger tsara indrindra amin'ny fanamarihana laser sy ny famokarana milina fanandramana | Boln
1.Mesera manamarika laser miaraka amina rafitra fitsapana ATEQ Leakage, laser fibre optique 30Watt ary mpamaky voamarina kalitao.
2.Ny rafitr'ilay masinina dia vita amin'ny vy ary ny tranony manamarika dia manana varavarana fidirana mandeha ho azy, miaraka amina sakana optique izay miaro ny mpandraharaha rehefa mampiditra ilay singa.
3.Ny masinina koa dia mety amin'ny fanamarihana laser amin'ny volute izay misy haavo samy hafa: azo atao izany amin'ny fanovana ny toeran'ny lohan'ny laser ho azy.
4.Misy piston roa manidy ny efitrano volute hanatanterahana ny fitsapana leakage ao anaty trano.
5.Ny masinina dia ampifandraisina amin'ny ATEQ hanamarinana ny valin'ny fitsapana amin'ny vokatra roa (mifototra amin'ny etona, ny tsindry rivotra dia fehezin'ny valizy solenoid).
6.Raha ratsy ny valin'ny fitsapana leakage dia holavina ilay singa. Raha tsara ny vokatra dia hiroso amin'ny fanamarihana laser ny masinina. Raha vantany vao voamarina ny kalitaon'ny fanamarihana dia hiverina amin'ny toerany ilay mpamaky kaody ary hamoaka ireo singa ireo ny piston.
7.Ny masinina dia afaka mampakatra marika datas sy valin'ny fitsapana leakage amin'ny rafitra fitantanana ny mpanjifa ihany koa. Amin'izany fomba izany, ny tahirim-baovaon'ny mpanjifa anatiny dia havaozina miaraka amin'ny angon-drakitra azo soratana mifandraika amin'ny singa noforonina tsirairay ary azo atao ny mamerina ilay sombin-tany amin'ny niandohany raha sanatria misy fahasimban'ny vokatra.
Teo aloha: Gear Shaft Laser Marking Machine BL-MGS-IPG100W
Manaraka: Milina fanamarihana laser feno